Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise umfuziselo yesibini, nesendlu pa
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo nezingeloncedo ejolise umfuziselo yesibini, nesendlu pa
Nkqu pa parlour ukuba aye kuni, ndicinga ukuba kusoloko kungekho ngumzekelo omhle kakhulu ezincinane yokusebenza. Ngokukodwa, okanye baye babekwa malunga zevenkile ngasemva, inani onobuhle ambalwa kakhulu kunjalo. Njengoko umthengi, hte kodwa ngumntu imodeli, kodwa kukho ke nazo neengxaki, kukho kwakhona iinzuzo. Ngoko ke, ngokoMthetho kujoliswe imodeli minor, inzuzo okanye ukungalungi, siza kujonga izinto kuyo.
Okokuqala nje engxakini, kuba ulwazi imodeli na ngaphantsi, kukuba imveliso yaye musa jonga okunene hit ayaziwa. Ukongeza, umsebenzi akunakwenzeka ekuhlangabezaneni olwenzekayo ephantsi, kusenokuba nzima ukuvavanya igagasi ROM.
imifuziselo ezingephi, kakhulu okanye ezithandwayo, inani imifuziselo amadala bugqithile kwexesha evela kwintengiso. Kuba loo njongo, nathi ukuyichaza iinkcukacha ezifana ukuveliswa okanye kwesiphatho iinkcukacha ukulinganisela encinane kakhulu. Xa ukuthetha indlela ukuqokelela iinkcukacha ukwenza, uya kulahleka kuphela uqinisekise okunene hit ngokwakho.
betha nje kancinane, ngokuba mna andazi kakhulu, kuya kufuneka isigqibo esithile isidanga zotyalo-mali. Olu tyalo-mali yokuqala ngolwazi oluqokelelweyo, kukuba kufuneka ulicingele. Ukongeza, ukuba kusoloko kukho imeko apho kungekho nokubaleka luphawulwa imodeli minor. Isibakala sokuba tyando, ngamnye amaza elungileyo kunye namaza nokubi kungenzeka ukuba angaxingi, ngexesha kwamaza ezimbi, kuya kuthabatha ixesha ekuhlangabezaneni ukuya jackpot lilonke.
ukufaka imodeli minor, ukuba ukwandisa amathuba yokuwina, utyalo-mali kunye nomzamo ingqokelela yolwazi, naye uya kufuneka ulwazi ukuze bafunde amaza.
Kuyo akukho luncedo koko, umsebenzi ukuze nokuba udla ukubetha iqonga ejoliswe hayi, kuba omnye umntu wayengekafiki wambetha, ukuba kukho umntu na imali ngokwezinga elithile self-mali, ukufunda igagasi ngalinye kulula. Soloko ukubaleka nje imizekelo minor buthathaka, ayanda amathuba ukuba yokudlala kudlalwa kule kalukhuni.
kwimeko, ezifana owasebenzisayo i data ukunikela ingqalelo kwinto enye, kuba kwakhona ingako ukubetha omnye umntu, ngamnye Amaza kunye kwesiphatho ixesha yokuhlangabezana luya kulula ukubona. Yizani hit kwisithuba sale kakhulu ngokubanzi, ezifana amathuba aphakamileyo, isibakala sokuba ixesha lula nganye ukufunda, nina uncedo lukhulu.
Kwakhona, imifuziselo ezincinane ezinjalo, kuya kubakho izinto ezininzi kusetyenziswa imodeli umcimbi. Noko ke, ekubeni kwiimeko ezininzi ukwandisa ukusebenza kuphela, nceda ujonge amanxeba. ezidlulileyo kwiveki enye data Ubukhulu becala, ukuba kukho indlela yokwazi ulwazi intlawulo ethile, ngaba bekungayi kuba bhetele ukuba uqinisekise.